Dargaggootni qabsaa’ota duriirraa barachuun imala haaromsaa dhugoomsuu qabu
Itoophiyaan imala haaromsaa eegalte dhugoomsuuf dargaggootni gahee olaanaa akka qaban beekamaadha. Kunis, sochii misoomsa hawaas-dinagdeefi siyaasa biyyattii gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu keessatti hundaa ol dargaggootni humna omishaa waan ta’aniifi.
Gama kanaan misooma hundaa mirkaneessuuf dargaggootni hirmaannaa hanga ammaatti taasisaniin bu’aalee hedduun argamaniiru. Kunimmoo itti fufiinsaan akka cimuuf dargaggootni biyyattii marti kaayyoofi kutannoon hojjechuuf gootota duriirraa barachuu akka qaban qabsaa’otni Sochii Dimokraasummaa Saba Amaaraa tokko tokko BOIf ibsaniiru.
Qabsaa’otni durii dhaabbatichaa kana kan ibsan wayita hundeeffama waggaa 37fa Wixata darbe Galma Barkumeetti mataduree, “Goototni qabsoo hidhannoo durii keessatti hirmaachuufi aarsaa kaffaluun seenaa boonsaa galmeessitan hoggayyuu kabaja isiniif qabna” jedhuun kabajamerratti yoo ta’u, dargaggootni hojiilee misooma hawaas-dinagdeefi siyaasaa fiixaan baasuuf kutannoon hojjechuu akka qabu jedhu.
Kana waliinis nagaafi tasgabbii guutummaa biyyattii mirkaneessuuf labatni haaraan keessumaa dargaggootni gahee irraa eegamu bahachuufi irra deebiin seenaa haaraa galmeessisuu qabu.
Kana malees, qabsaa’otni sirna kabaja ayyaanichaarratti hirmaatan kunneen dur wayita qabsoon rakkisaa turetti kaayyoo sirrii qabachuufi miira jaalala biyyaa keessa ta’uun har’a biyya Itoophiyaa jedhamtu dhalootaaf dabarsuu danda’uu isaaniitiif gammachuu qaban ibsanii, kanaan boodas labatni haaraan ittifufsiisuu qaba, jechuun hubachiisaniiru.
Qabsaa’ota kanneen keessaa Birgaader Jeneraal Xuriyyee Assaggee akka jedhanitti, wayitii qabsootti dubartummaafi waraanni, imalli karaa dheeraa, ba’aa ulfaataan, bu’aa bahiifi imala dukkanaa darbuun kan danda’ame kaayyoo ofiifi jaalala biyyaa hubachuun tokkummaan socho’amaa waan tureefi. Yeroo ammaas misoomawwan jalqabaman galmaan gahuuf dargaggootni imaanaa kennameef beekanii amanamummaan fiixa baasuu akka qaban dhaamu.
Qabsaa’aa Isheetuu Yishaawu gamasaaniin akka dubbatanitti, seenaan biyyattii akka hinbadneef qabsaa’otni durii carraan Itoophiyaa harka keenya keessa waan jiruuf, qaama biraatiif dabarsinee akka hinkennine hubachiisaa turuusaanii yaadatu. Kunimmoo biyya ofii jaalachuufi kabajuun hangam ulfina akka qabu kan nama hubachiisuudhaa jedhanii, dhalootni ammaas ta’e kan dhufu sirnaan biyyasaaf jaalala horachuu qaba jedhu.
Qabsaa’otni wayita sana turan ofirra biyyasaanii caalchifachaa akka turan ibsanii, dargaggootni si’anaas biyya abbaasaaniitiif aarsaa barbaachisu hunda kaffaluuf kutannoodhaan imala haaromsa eegalameitti gaafatamummaa olaanaan bahachuu akka qaban hubachiisu.
Shantammaalaa Bayyanaa Chakkolis qabsaa’ota durii keessaa tokko yoo ta’an, hacuuccaa sirna bittaa wayita sana tureen, dargaggootni barnootasaanii addaan kutanii qabsootti makamuufi adda waraanaatti dhiyaachuuf kan dirqisiifamaa turan ta’uu ibsu.
Sirna ammaa keessatti garuu gochi akkanaa waan hinjirreef, qaamolee farra nageenyaa ta’aniin osoo hingowwoomfamiin diina biyyattii, hiyyummaafi doofummaarratti duuluun imala haaromsaa dhugoomsuuf tattaafachuu qabu jechuun gorsu.
Umurii ijoollummaasaanii irraa kaasanii qabsaa’aa kan turan Sistar Dastaa Taakkalaa gamasaaniin, dur kaayyoosaaniifi kutannoo qaban galmaan gahuuf jabinaafi ofitti amanamummaa maatiisaanii irraa barachuu dubbatu.
Kanaanis daangaa biyyasaanii kabachiisuu danda’aniiru. Kunimmoo har’a yoo ilaalamu seenaa boonsaa waan ta’eef, lammiileen hundi biyyasaatiif waan gaarii hojjechuu akka qabu dhaamu.
Birgaader Jeneraal Adam Mahaammedis qabsaa’ota durii keessaa isaan tokko. Akka isaan ibsanitti, wayita qabsaa’aa turanitti heera biyyattii kabajuufi kabachiisuuf ergamsaanii sirnaan bahachaa turaniiru. Dhalootni har’aas fakkeenya kana fudhachuun gama kamiinuu heerri biyyattii guutummaatti hojiirra akka ooluuf carraaquu akka qaban dubbatu.
Walumaagalatti, ayyaanni hundeeffama Sochi Dimokraasummaa Saba Amaaraa sirnoota gara garaatiin iddoowwan addaddaatti kan kabajame yoo ta’u, seenaa biyyattii keessatti qabsaa’ota aarsaa guddaa baasuun walabummaafi tokkummaa Itoophiyaa eegsisaa turaniif beekamtiifi badhaasni hamileesaanii jajjabeessu kennameera.
Qabsoon gootota onnee qabaniin raawwatamaa ture har’as borus dargaggoota biyyattiitiin misoomarratti dabalamuun haaromsa biyyattii dhugoomsuun akka danda’amu ibsameera.
Torban kana/This_Week 17554
Guyyaa mara/All_Days 1442334